Royal Big Cat: January 2013
“ ခေါင်းခါဆေး. . . ”
ကြောင်ကြီး ဘလော့ ထောင်ပြီး ၁လ အတွင်း ၀င်ရောက်ကြည့် ရှုအားပေးသူ ၀ါသနာရှင် ၁သိန်း ပြည့်မြောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့် သူများကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားမှာပါ.... Bloge ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဇတ်ကားတွေ ပုံတွေ အမြဲ ပို့ပေးသော KL, တစ်ဦးတည်းသော Admin ကျားကြီး, မေလ်းနဲ့ အမြဲဆက်သွယ် တင်လိုသမျှတောင်းတဲ့ သားကြီး, အိုးကြီးကြီးပုံတွေ တင်ပေးပါဆိုပြီး မေးလ်ထဲ ပုံအမြဲပို့ပေးတဲ့ တုတ်ကြီး တို့ သူငယ်ချင်း တစ်စု, ဘာတင်တင် comment အမြဲဒိုင်ခံရေးပေးတဲ့ ကြောင်ကြီးရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ် ရှင်းသန့် တို့ အားလုံကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်.
မြန်မာ သတ္တိ ကမ္ဘာ သိ
ပထမ ကျောပေးထားပုံပဲရလို့ အရင်တင်ပေးလိုက်တာပါ... ခုနောက် ရှေ့က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရလို့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဘယ်က ရွှေဇင်လဲ ဆိုတာတော့ ကြောင်ကြီးလဲ မသိပါဘူး... ဘော်ဒါတို့ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ရှာစားကြပေတော့............
တင်ပြီးသားလေးပါ... တစ်နေ့ကို ၄ခါလောက် ဘလော့ထဲ ရောက်လာပြီး အမြဲအားပေးတဲ့ ၀ါသနာတူ ဘော်ဒါကြီး ရှင်းသန့် ဇတ်ကားတွေပဲ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ တစ်နေ့ ၄ကြိမ်ဝင်ကြည့်ရတာတန်အောင် ၄ကား ဖြစ်ဖြစ်မြည်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
တောင်းဆိုထားသူ ရှင်းသန့် အတွက်ပါ.....Blogger ကြောင်ကြီး
ကြောင်ကြီးရဲ့ အမြဲတမ်း ပရိတ်သတ် ရှင်းသန့် အတွက်ပါ.......... ရှင်းသန့် ဂလုနိုင်ပါစေ....
မော်ဒယ် သစ်ကလေး မြတ်နိုးအိမ်ပါ..........
ဘူလေးလဲတော့မသိ မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
မြန်မာမော်ဒလ်လောကမှ ပွင့်လင်းသူလေး ရွှေစင် အမည်ရင်း- ရွှေစင် အဖအမည်- ဦးကျော်မြိုင် အမိအမည်- ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည် မွေးသက္ကရာဇ်- သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် မွေးချင်း- ၃ ယောက် မွေးရာဇာတိ- မန္တလေးမြို့ မော်ဒယ်ရွှေစင်ကို သြဂုတ်လ၂၁ရက် ၁၉–ခုနှစ်တွင် တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ဦးကျော်မြိုင် ၊ မေမေဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်တို့မှ မန္တလေးမြို့တွင်
မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း(၃)ဦးအနက် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီး အစ်ကို (၂)ဦးရှိသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ဥပဒေမာစတာဘွဲနှင့် DBL တက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ (သူကိုင်တဲ့ တယ်လီဖုန်း ဟမ်းဆက်ကအစ စီးတဲ့ ဇိမ်ခံကား အဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သိန်းချီ အကုန်အကျခံ ၀ယ်ထားတဲ့ အကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောခဲ့သူပါ။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကျော် သူဌေးကြီးတဦးက အစစ အရာရာ နိုင်ငံခြားဈေးဝယ်ထွက်တိုင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာတွေ တထပ်ကြီး ပေးလေ့ရှိတယ်လို့လည်း နံမည်ကြီးတယ်။ သူ့ကို Lucky လေး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ပါသတဲ့။ နောက်တခုက သူက တကယ်လဲ အဲဒီစပွန်ဆာချစ်သူအတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်ပေးခဲ့၊ မပေးခဲ့တော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိမှာပါ။သူ ကစားပွဲသွားတိုင်း ရွှေစင်က အမြဲလိုက်ရသူလေးပါ တဲ့။ ရွှေစင်ပါတဲ့အတွက် အမြဲပဲ
အနိုင်တွေ ရခဲ့လို့လား မသိဘူး။(ဟိုတစ်လောကတော့ ဒေါ်လာ သန်း၄၀ ရှုံးတယ်လို့ ၀ီးကလီးထဲမှာ ရေးထားတာ ဘယ်သဌေးလည်း မသိဘူး။ မနှစ်ကတော့ ရွှေစင်တယောက် ချစ်သူနဲ့ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာကနေ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှာ ၁၉ ချက် ချုပ်လိုက်ရပါသတဲ့။ဒီလောက် ပိုက်ဆံလည်း တတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဘာကြောင့် တက်ရသလဲ ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်က စိတ်ဝင်စားကုန် တာပေါ့။တကယ်တော့ မှုခင်းသဘော သက်ရောက်သွားလို့ အဲဒီတုန်းက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမတက်ခဲ့တာပါ တဲ့။) အနုပညာဘ၀အစ မန္တလေးမြို့တွင် တစ်နှစ်နီးပါးခန့် မော်ဒယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့တွင် အရီးတောင်းလက်ဖက်၊ ဗလာစာအုပ်၊ မိုးနတ်မယ်ပါတိတ် ရွှေဆိုင်ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးပြီး Step အင်္ကျီကြော်ငြာပြိုင်ပွဲအတွက် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် ကျင်းပခဲ့သော Step Fashion Boy & Girl Model & Photo Contest 2009 တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှ ဆုရရှိခဲ့ပြီး အနုပညာလောကသို့ စတင် ၀င်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ရွှေစင့်အကြောင်း လက်ရှိ ၀င်ငွေထက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု များနေသည့် တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်ရွှေစင်ကို ပြည်တွင်းဂျာနယ်များနှင့် အနုပညာ အသိုင်းအ၀န်းတွင် ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြပြီး မည်သည့်ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ငြိစွန်းနေသည်ကိုလည်း သိချင် နေကြသည်။ “ဟန်းဖုန်းက LV တံဆိပ် (Limited Edition) သိန်း ၃၆၀ ပေးရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Branded တွေကို အကြိုက်များနေ တယ်။Branded တွေကိုပဲ setလိုက်
၀ယ်သုံး ဖြစ်တယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်း ပြည်ပမှာ ဈေးဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဈေးတခါဝယ်ရင် ဒေါ်လာ ၉ သောင်း နဲ့ ၁ သိန်းကြား သုံးဖြစ်ပါတယ်” ဟု မော်ဒယ်လ်
ရွှေစင်က သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ်7day ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် ဂျာနယ်တွင် ဖြေဆိုထားသည်။ သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လအတွင်း ဖြန့်ချိခဲ့သည့် The Crime ဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင်လည်း “ဒီကိုလာစတုန်းက မာ့ခ်တူး အလုံးလေးတွေကို သဘောကျနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ မာ့ခ်တူး ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ ရှုတင်သွားရင် ပစ္စည်းက အရမ်းများတော့ တစီးတည်းနဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်တစီး ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ မာစီဒီးကို အရမ်းကြိုက်နေတာနဲ့ မာစီဒီးပဲ ၀ယ်ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်တစီးက စီလီယာ တူးဒိုးလေး။ ပြိုင်ကား ဒီဇိုင်းလေး ဆိုတော့ ညနေပိုင်း အရမ်းပင်ပမ်းနေရင် အမိုးလေးဖွင့်ပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက် မောင်းဖို့ ဝယ်လိုက်တယ်” ဟု ဖြေဆိုခဲ့သည်။ မော်ဒယ်လ်ရွှေစင်သည် မန္တလေးသူတဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် ကျင်းပခဲ့သော Step Fashion Boy & Girl Model & Photo Contest 2009 တွင် ၀င် ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရာမှ ဆုရရှိခဲ့ပြီး အနုပညာလောကသို့ စတင် ၀င်ရောက်လာသူဖြစ်သည်။ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာများပေါ်တွင် အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည့်အပြင် တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်တဦးအနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မော်ဒယ်လ်များ၊ သရုပ်ဆောင်များ ၀င်ငွေ ကောင်းနေပြီလား ဟု Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုဝေဖြိုးက “ တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲနေတယ်။ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ လူတော်တော် များများက ငွေကို ဒီလောက်အထိ မသုံးနိုင်ဘူး။ လူတော်တော်များများက တနေ့စာ တနေ့ကို အနိုင်နိုင် ရှာဖွေနေရတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုစကားမျိုး ပြောတယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ ကြွားပဲပြောပြော၊ ဘာပဲပြောပြော ရေးသားဖော်ပြတဲ့လူက နောက်ကွယ်က အကြောင်းကို သိကို သိမှရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ်လောက ရဲ့အခြေအနေကို အားလုံးသိပြီးသားပါ” ဟု ယင်းဂျာနယ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ “တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်တယောက်က မြန်မာငွေ သိန်း ဆယ်ဂဏန်းတောင် သုံးဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးပါဘူး။ ဒီအခြေ အနေမှာ သူ့အနေနဲ့ ဒီလောက်သုံးနေတယ် ဆိုတာတွေ ဖြေထားတော့ ဒီဝင်ငွေက ဘယ်ကရနေလည်း ဆိုတာ လူစိတ်ဝင်စားစရာ ပို ဖြစ်လာစေတယ်” ဟု နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာ တဦးက ပြောသည်။ မြန်မာပြည် အနုပညာလောကတွင် ရုပ်ရည်ချောမောသည့် အနုပညာရှင်သစ်များ ပေါ်ထွက်လာပါက ငွေကြေးထောက်ပံ့မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် (စပွန်ဆာ) ကြီးများ ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။ “နာမည်ကြီးပြီး ရုပ်ချောတဲ့ မော်ဒယ်လ်တို့၊ မင်းသမီးတို့ ပေါ်လာပြီဆို ငွေတတ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေက အရင် လာ ကြတာ။ ဒီလောကထဲ စ၀င်တာ အချိန်ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးဘူး၊ ငွေတွေ ဒီလောက် သုံးနေတယ်ဆိုတော့ တော်ရုံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တော့ မဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် အချိန် ခဏအတွင်းမှာ ငွေသုံးတာက အစ၊ဖုန်းဆိုလည်း တော်ရုံ ၀ယ်လို့မရတဲ့ ဟာမျိုးတွေ ၀ယ်ပေးထားတာလို့ သိရတယ်” ဟု ပြည်တွင်း ဂျာနယ်လောကမှ ၀ါရင့်သတင်းထောက်တဦးက ဆိုသည်။ မော်ဒယ်လ်ရွှေစင်သည် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တဦး၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ခံနေရကြောင်းပြည်တွင်း ဂျာနယ်လောကမှ သတင်းထောက်တဦးက ဆိုသည်။ “မော်ဒယ်လောက ဆိုတာလည်း သိတဲ့အတိုင်း အကပ်မရှိရင် ပေါက်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ပိုက်ဆံ မရှိရင် လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။
အေဂျင်စီနဲ့ ချိတ်ထားလို့ ကိုယ့်ကိုခေါ်ရင် သောင်းဂဏန်းလောက်တော့ ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ထောက်ပံ့ပေးမယ့် လူတွေ ရှာကြတာ” ဟု မိတ်ကပ်လိမ်းသည့် အလှဖန်တီးရှင် တဦးက ပြောသည်။ “မော်ဒယ်လ်လောကမှာ ရှိတဲ့ လူတိုင်းကိုတော့
ဒီလို လုပ်စားနေတယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး။အနုပညာကို စိတ်ဝင်စားပြီး မော်ဒယ်လ် လောကထဲ ၀င်လာတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ခက်တာက မြန်မာပြည် မော်ဒယ်လ်
ဈေးကွက်ကလည်း နိုင်ငံတကာလောက် မကျယ်ပြန့်ဘူး။ရတဲ့ ငွေကြေးနည်းတယ်။ ပွဲတခုမှာ ပါမယ်ဆို ကိုယ်ကတောင် ပြန်စိုက်ရမယ့် အနေအထားတွေ ရှိနေတော့ ငွေချမ်းသာတဲ့ သူတွေရှာပြီး ပျက်စီးကြတာများတယ်” ဟု နာမည်ကြီး မော်ဒယ်လ်အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာမော်ဒလ်လောကမှ ပွင့်လင်းသူလေး ရွှေစင်
သဇင် .... ချစ်ဦးမှာလား ... တဲ့
အမေရိကန်ရောက် အမျိုးသားများအတွက် သတင်းကောင်း
စင်ပေါ်တွင် အမျိူးသမီး၏ စကတ်လှန်ကြည့်ခြင်း /ရင်သားက...
လတ်ဆတ်သော မှိုများ စားသုံြး...
သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ၀...
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးအပျိုစင်08:18 Myanmar ...
ရုပ်ချောတယ်၊ အပြင်းပြေသတ်တယ်10:00 Myanmar Express...
မိန်းမသား တစ်ယောက် ဘ၀အား နင်းခြေခဲ့သော ရတာနာပုံ တယ...
ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကျိုတစ် ပါတ်​လျင် နှစ်​ကြိမ...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁) Anal...
(မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တယ်ဆိုတာ ပုံမှန် (နော်မယ်လ်) အ...
Ecchi Anime Cosplayers4Lifeမှ
ကာမိုင်းရဲစခန်းအား တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမှု အပြည့်အစံ...
8DAYS ဂျာနယ်ပါ ၀ါဆိုမိုးဦးပုံ
Doggy စတိုင်နဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့အိုး
KTV သို့ အလည်တစ်ခေါက်
မြန်မာတွေလဲ ပြမှ ပြအဲ့လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြရမှ...
တစ်ပုံထဲ ဒါပေမယ့် လန်းချက်ကွာ
ဘယ်ကလဲတော့ မသိဘူး လန်းတာတော့ လန်းသား
smoking myanmar girl pussy
Cute Myanmar girl ပါတဲ့
မြန်မာသမီးရည်းစား အတွဲ (ပုံဟောင်း)
ဘယ်က ကျောင်းသူလေးလဲတော့ မသိဘူး
နို့ကို အသေချေတဲ့ မြန်မာစုံတွဲ
Myanmar Love တဲ့
မြန်မာ Tom Rider(နန်းသီရိမောင်)
အွန်လိုင်းမှ ၂၄ ဘာသာကို မြန်မာလို ပြန်နိုင်ပြီ
သူတို့ပြောသမျှ ခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွာ...
ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ Sex Group 2
ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ Sex Group
KIA တပ်မဟာ(၅)နယ်မြေ အတွင်း အဓမ္မပြုကျင့် ခံရသူ မရှန...
မြန်မာ Sexy မော်ဒယ်များ
ကြော်ငြာထဲမှပုံများ နှင့် မြန်မာ Sexy မော်ဒယ်ပုံမျ...
သင်းသီရိလို့ ပြောတာပဲ ဘယ်ကလဲ တော့မသိဘူး
နောက် TV မှာ Sky net Logo နောက်ခံလေးနဲ့ 
မြန်မာမှန်းသိအောင် ရိုက်ပြထားတာ တော်တယ်.
အဲ့လိုမျိုး တွေရှာပြီး ချက်ကြစမ်းပါ
Myanmar Hottie Lady
အောက်ဒိုးမှာ ဆွဲတဲ့ အတွဲ
မိန်းမတို့ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
၀ါသနာကြီးသူများ အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါတဲ့
ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး၁၀ဦ...
မုဒိန်းမှုဆိုရင်တော့ ကြောင်ကြီးကတင်မှာပဲ ဘယ်သူ ဘယ်အ...
VZO ထိုင်ရင် သတိထားကြဖို့
ဘေဘီပျိုနဲ့စကားတွေ့ဆုံပြောဖြစ်ခြင်း သူမရဲ့ ပထမအတွေ...
တော်တော် ကြမ်းတဲ့ အတွဲ
Maria Lwin Coz တဲ့
ဘယ်ကလဲတော့ မသိဘူး မြန်မာရုပ်တော့ ထွက်တယ်
ဆင်းရဲသူတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် ဗြ...
နှစ်သစ်ကူး 2012-13 ရန်ကုန်ည အမှတ်တရ ပုံလေးများ
မြန်မာမလေးတွေ နိုင်ငံခြား ရောက်ရင် ဒီလိုတွေ ဖြစ်ကု...
အာဆီယံ၊ ဥရောပ ချစ်ကြည်ရေး
ကိုယ်တိုင် ရုက်လေးတွေပါ ဆိုပဲ
Big Big Whors ပါ...
Burmese In Thailand ဆိုတဲ့ Page တစ်ခုတွေ့လို့ ဆွဲလ...
facebook ကစော်လေး တစ်ပွေပါ
အပေးအယူတော်တော် မျှတဲ့ အတွဲ
New Year အမှတ်တရ မေမြို့မှာဆွဲလာတဲ့ မမ နှင့်အမှတ်တ...
နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်နဲ့ ကုန်းတဲ့ သူသူဆိုပဲ
မြန်မာတွေလဲ Body Pain တွေ တက်တူးတွေ လုပ်ကုန်ကြပြီ
မြန်မာ undarware မော်ဒယ်
မြန်မာ ဟုမ်းမိတ် လေးတွေ
မိန်းကလေးများ Sexy ကျကျ အ၀တ်အစားဝတ်နည်း
ဓါတ်ပုံ ဌေးဝင်း လက်ရာများ
မြန်မာဂေါ်လီနဲ့ ဆွဲချက် လန်ထွက်နေတာပဲ
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် တူသူလေး
သူ့ကို သူအဆိုးဆုံးအလုပ် တစ်ခုလုပ်နေတယ်တဲ့
ယမင်းတဲ့ FB မှာတွေ့လို့ ကူးလာတာပါ
Facebook မှရှာဖွေ တွေ့ရှိသမျှ
လန်ထွက်နေအောင် ဆွဲတဲ့ အတွဲ